maamulka degmada cadale, Adale, Somalia
Waa Guri Deegaan iib ah oo ka kooban #4_Qol, #Musqul, #Kushiin . Wuxuu kuyaalaa Gurigan agagaarka Al-Cadaala ee Degmada Huruwaa. wuxuu haystaa Document sax ah, Cabirka waa 15x20M2. Qiimaha iibka waa  $31,000. iyo heshiis
Address: maamulka degmada cadale, Adale, Somalia
State/county: Shabeellaha Dhexe
Guri iib Ah - maamulka degmada cadale, Adale, Somalia